Oduu Gaddaa:Harmeen HD ABO jaal Daawud Ibsaa addunyaa kana irraa du’an boqochuu – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Gaddaa:Harmeen HD ABO jaal Daawud Ibsaa addunyaa kana irraa du’an boqochuu
Oduu Gaddaa:Harmeen HD ABO jaal Daawud Ibsaa addunyaa kana irraa du’an boqochuu:
Harmeen Hayyu Duree ABO (Jaal Daawud Ibsaa) Aadde Alamii Gaarii Tullam umrii isaanii waggaa 93tti har’a Caamsaa 15, 2020tti du’aan Addunyaa irraa boqotan.
Sirni awwaalcha isaanii Caamsaa 17, 2020tti Oromiyaa, Godina Horro Guduruu Wallaggaa, Ona Horroo, Ganda Abuunaatti raaw’atamuuf jira.
Addi Bilisummaa Oromoo HD-ABO J/Daawud Ibsaa, maatii fi firoottan hundaaf jajjabina hawwa.
“Kana kanan hin gammanne, maaliin gammada?” Harmee J Daawud Ibsaa, Fulbaana 15, 2018.
Harmeen HD ABO guyyaa har’aa boqotan. Maatii isaaniif jajjabina hawwina.
Harmeen kun waan hedduu keessa darban. Namni Jaal Daawud waliin hidhmanii turan tokko akka himanitti, Harmeen Jaal Daawud bara 1970 jalqaba yemmuu Ilmi isaanii magaalaa Shambootti Dargiin hidhamee ture galaa deddebisaa turan. Guyyaa tokko galaa ilma isaaniif kennuu deeman poolisootni hidhata warra farreen qabsoo Oromoo qaban waliin ta’uun waan Daawud mana hidhaa milquuf jedhe jechuun ija ishee duratti rasaasaan rukutan ni kufe deddebisanii dhukaasanis gangalatee kufee, yemmuu kana harmeen isaa fiigdee mucaa koo jettu poolisiin sadafiin dhaanee darbatee kuffise lukti isaan cabe. Ummatni waan baayyee balaalleffateef poolisa sana qabuun mana murtii dhiyeessan ilmi isaanii akka ragaa ba’u gaafatan . Jaal Daawud lakkisaa ani poolisii tokkorratti osoo hin taane sirna Poolisii namatti bobbasee gidirsaa jiru irratti qabsaa’uun sirna dhabamsiisuudha jedhe jedhan.
Kana hundaa keessa ba’anii waggaa 40 booda ilma isaanii Fulbaana 15 bara 2018 ijaan argan. Guyyaa kana namni isaan waliin ture, wagga 2n gaafa simannaaf Finfinne dirree xiyyaaraa dhaqan akkas jedheenii gaafate.”Gammaddanii?” jedheen. Isaanis,”Kan kana hin gammadne, kam gammadu? Yoo ammas na jalaa hin ariineef “ jedhan .Eehee, harmeen goota goota! Baga dhalatan; baga jiraatan, nagaan ilm
a isaanii arganii jiru; nagaan haa boqotan; biyyeen ittaa salphatu!!
Gaddi kun gadda Oromoo cufaati sirna haadha gootaaf malu taasisuu nurraa eegama!
“Gaaftokko jaal #Daawud Ibsaa waa’ee harmeesaanii akkas jedhanii nutti himan:
“Bara 1970moota keessa yommuun mana hidhaa ture harmeen koo torban torbaniin deddeebitee na gaafatti. Nyaatas naaf fiddi. Nagaa natti dhaamtee gaafa deemuuf kaatu yeroo hunda imimmaan fuulasheerra yaa’a. Hangan deebi’ee kutaan itti hidhamu seenutti dhaabattee na ilaalti. Gaaftokko nagaa natti dhaamtee yommuu deebi’uuf jettu garaanshee baay’ee raafame. Poolisoonni yeroon kee dhumeera jedhanii gara kutaan itti hidhamuutti ol na deebisaa jiru. Harmeen koo achuma dhaabattee boossi. Kanuma gidduutti poolisiin tokko dhaqee deemi asii jedhee harmee koo darbate. Harmeen koo utuu iji koo ilaaluu bo’oo wayii keessatti kufte. Dallaan nu gidduu jira, poolisiin harka koo qabee jira. Lafti natti dukkanaa’e. Dhaabadhee waan sana ija koon ilaaluurra du’uun hawwe. Dirqamumaan ol na deebisan. Harmeen koo sanumarraan kan ka’e miillishee tokko ni naafate/laamsha’e.
Booda poolisii harmee koo darbate sana qabanii mana murtiitti dhiyeessan. Anaan immoo ragaa na waaman. Itti murteessuuf jenna maal jetta naan jedhan.
Akkas jedheen deebiseef:
Ani kanin qabsaa’aa jiru poolisiin tokkittiin harmee koo darbattee kuffifte kun akka hidhamtuuf miti. Sirni poolisii akkasii bobbaasee harmee koofi harmee ilmaan Oromoo hundaa boossisu akka manca’u, Oromoon biyyaafi qabeenyasaarra kabajamee akka jiraatuuf malee. Poolisiin kun yakkaa hin qabu. Yakkamaan sinuma mataa keessani. Poolisii kanaaf eyyama nama darbachuu, nama gidirsuufi ajjeessu kan kenneef sirna keessani. Haqni haadha kootii kaninni deebi’u sirni kun diigamee sirni dhalli namaa hundi kabajaafi walqixxummaadhaan keessa jiraatu gaafa hundeeffamu malee poolisii tokkittii hidhuudhaan miti jedheen deebiseef” jedhan.
Har’a harmeensaanii kun boqotte jechuun dhaga’e. Boolla kee daadhiin haa guuttu, yaa harmee gootaa!”
Jaal Daud Ibsa’s mother passed after she saw her son walk through Bole airport.
Heroes and heroines often die before their parents.
Haati gooticha Oromoo Jaal Daawud Ibsaa addunyaa kana irraa boqotaniiru.
Haati Oromoon ayyaantuun kun umurii harraagessaa akka qabataniif Waaqa kadhachaafii turre. Kunoo, ilma isaanii, qabsoo Oromoo keessatti of kennee ture ijaan arganii, addunyaa kana irraa boqoatan. Jaal daawud dabalatee obbolaan, maatii fi firoottan marti Waaqayyoo isaan haa jabeessu!
Haati Oromoo keenya kun, milkii qabu; ekeraan isaanii booka haa unatu!
Nagaan Haa Boqoatan!!
Waggaa 50 guutuu nagaafi tasgaabbii, boqonnaa hin arganne.
Ijoollee qaban lamaan faana mana
hiidhaa Shamburraa amma Dambi-
Dollootti, Dambii-Dollorraa amma
Finfinneetti guddoo dhama’aniiru.
Ilmi isaanii inni Quxusuun Tolasaan
hidhaa waggoota dheeraan booda
hiikamee osoo hin bubbulle midhaa
mana hiidhaa Dargii keessatti irra
gaheen adunyaa kanarraa erga godaanee turee jira.
Adde Alamii Gaarii Ijoollee Qaban
lamaan guddisaanii Qabsoo Oromoof keennuun jireenya nagaafi tasgaabbii hin qabine waliin baroota dheeraa jiraataniyyuu,
har’a lubbuun isaanii dabartee
bakka namuu irraa hafuu hin dandeenye dhaquun isaanii bay’ee nama gaddisiisa.
Waaqi umaa lubbuu isaanii qabbana,
maatii isaaniif ammoo jajjabiina haa kennu.
”Nuyis akkuma haadhaaf abbaa keenyaa duuneerra jennee ture”
Ijoollee magaalaa Ambootti haadhaafi abbaan isaanii jalaa duunaan jireenya daandiitti bahan. Amma maal irra gahan?
Viidiyoo kana daawwadhaa!